खनन माफियाले ३१ वटा डाँडा नै बेपत्ता पारेपछि अदालतको प्रश्न - हनुमानले त लगेनन् ? - Everest Dainik - News from Nepal
खनन माफियाले ३१ वटा डाँडा नै बेपत्ता पारेपछि अदालतको प्रश्न – हनुमानले त लगेनन् ?
नयाँ दिल्ली, कार्तिक ७ । भारतको राजस्थानमा अवैध खननका कारण ३१ वटा डाँडा नै बेपत्ता भएको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले गम्भीर चासो प्रकट गरेको छ ।
उनले अवैध खनन् नै ती पहाड विनाशको मुख्य कारण रहेको जिकिर गर्दै प्रकृतिले दिएको पहाड नैसर्गिक रक्षकसमेत रहेको बताए । ‘राजस्थानको मरुभूमिबाट उड्ने धुलो या प्रदुषणयुक्त हावालाई ती पहाडले रोक्छन्, तर राजस्वको लोभमा राजस्थान सरकारले वातावरण विनाशमा मुकदर्शकको भूमिका निर्वाह गरेको छ,’ अदालतले भनेको छ । (एजेन्सी)
ट्याग्स: 31 hills missing, Aravali hills, illegal mining